Nagu Saabsan - Shijiazhuang Baoerxi Products Products Co., ltd.
Shijiazhuang Baoerxi Products Products Co., Ltd. waa soo-saare xirfad-yaqaan soo saarta alaabada alaabada laga soo bilaabo 1998.
Waxaan leenahay tikniyoolajiyad horumarsan iyo qalabka wax lagu farsameeyo, alaabadayada waxaa ka mid ah PE, EVA, EPDM, NBR / PVC iyo noocyo kala duwan oo sariirta isboortiga midabka. Waxaan leenahay in ka badan 40 qaab oo ah suufka jilibka, Kuwaas oo caan ku ah Yurub, Koonfur Bari Aasiya, Waqooyiga Ameerika iyo Bariga Dhexe iwm. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa dayactirka baabuurta, dhismaha, alxamida, korontada, isboortiga, jardiinada iyo dalabaadka kale ee warshadaha.
Si aan u buuxinno shuruudaha suuqyada, waxaan horumarinnay gogosha jilibka ee loo yaqaan 'EVA pads' (adeegsiga dharka gogosha dharka), jawaanno yoga, sariiraha yoga, sariiraha dibedda isku laalaada, jardiinooyinka iyo gawaarida dayactirka jilibka iyo waxyaabaha ku dhegan.
"Tayo tayo sare leh, miyir iskaashi daacad ah, sumcad shirkadeed wanaagsan, adeeg hufan oo dhaqso badan" waa falsafaddeena ganacsi ee shirkadda.
Ujeedada joogtada ah ee annaga ayaa ah inaan u hibeynno badeecado badan oo bacaha balaastigga ah leh, oo loogu talagalay macaamiisheenna qiimo macquul ah iyo tayo wanaagsan. Si xushmad leh u soo dhowow dhamaan asxaabta si ay xiriir ganacsi oo waqti dheer ah ula yeeshaan shirkaddeena.